Bogga ugu weyn » eBook » Tilmaamaha Khasaaraha Dhimashada ee Dhulka Hoostiisa ka Mamnuucay Amazon
Ma ogeyd qaadashada asbiriin cunug 3 jeer maalintii inay runti kordhin karto habka dheef-shiid kiimikaadkaaga? Ama in adigoo si fudud u calashanaya hal xabbo oo xanjada nikotiinka ah, dhab ahaantii waxaad ku qasbi kartaa jirkaaga inuu gubo dufanka jirka ee madax adag oo aad sannado badan haysay?
Qoraaga buugani wuxuu alifay buugiisa gacansiga ka dib markii uu hoos u dhacay 13 rodol oo uu hoos ugu dhacay dufanka jirka ee hal unug ah wax ka yar bil. Waxaad isla markiiba arki doontaa sababta ay muhiim u tahay haddii aad gacantaada ku qabato nuqul ka mid ah buuggan. Raadinta buuggan ma ahayn shaqo fudud tan iyo markii dhab ahaantii la mamnuucay illaa iyo dhowaan recently
Dabeecadda muranka dhalisay ee su'aal gelisay barnaamijkan awgeed, mar dambe laguma siinayo Amazon mana ka qaadan kartid nuqul buuggan dukaan buugga deegaankaaga ah. Facebook xitaa wey ka takhalustay bogga shaqsiyeed ee qoraaga! Nidaamkan dhulka hoostiisa ah waxaa soo saaray Matt Marshall oo ah shaqsi ruqsad haysta oo ah macallin jimicsi. Tilmaamahan, Matt wuxuu soo bandhigayaa sida ugu dhow wax kasta oo aad dhab ahaantii uga baratay miisaanka oo yaraada ay gebi ahaanba been yihiin.
Waa tan liiska waxa ku dhex jira buuggan…
Bilawga 44-Saacadda - sida loo lumiyo inta ugu badan ee 8.8 rodol ee ugu horreeya ee 44 saacadood iyada oo ay ugu wacan tahay tijaabo aan caadi ahayn
Sida loo isticmaalo khamriga (haddii aad doorato inaad u cabto taas) si loo dedejiyo dufanka habeenkii. * Fiiro gaar ah: tilmaamahan kaligiis ayaa u qalma kharashka gelitaanka dad badan. Haddii dhab ahaan waligaa lagugu wargeliyay inaad u baahan tahay inaad ku dhaarato aalkolo si aad u caato, waxay u egtahay waalli. Xaqiiqdu waxay tahay waxaa jira maro fudud oo aad ka faa'iideysan karto si aad wali u isticmaasho aalkolada oo aad u hesho calool adag & caato.
Waa maxay sababta qaar ka mid ah naqshadaha jir dhiska ee adduunka ugu jeexjeexan ay u calaliyaan xanjada nikotiinka (tani waa ikhtiyaari, UMA baahnid inaad isku daydo istiraatiijiyaddan su'aal gelinta ah si aad u caato).
Sida loo jajabiyo “meertada farxad la’aanta” ee ka dhigaysa dadka intiisa badan qanac la’aan iyo cayilnaan.
Sidee milyaneer badan oo soo noqnoqday u go'aamiyey "jabsasho" aan caadi ahayn oo kuu suurta gelineysa inaad ka hortagto baaxadda miisaanka lumisa ee cabsida badan, iyo sida aad ugu nusqaamin karto farsamadan lacag la’aan.
Sida loogu adeegsado “riyooyin aan nadiif ahayn” miisaan deg deg ah.
Isticmaal Dhammaan Pint: Matt ee "jalaatada jabsiga aan caadiga ahayn" ee runti kuu oggolaaneysa inaad wada baabbi'iso hal xabbo oo jalaato ah… oo aad soo toosi kartid khafiifka maalinta xigta.
Farsamada Matt Marshall ee ah "bahal-qaab / qaab-faneed" farsamaynta caatada iyo Kordhinta habka dheef-shiid kiimikaadka markasta oo aad khiyaameyso. (Haa, WAA INAAD khiyaameysaa).
Sidee cuntooyinka "sharka" ah u yihiin "spuds", "licorice cas" iyo xitaa biirka ayaa kuu soo bandhigi kara indho-indheyn.
Sababtoo ah jimicsiyada badankood waxay si fudud jidhkaaga u bartaan sida loo xajiyo baruurta… iyo sida loo "khiyaaneeyo" jirkaaga dufanka gubanaya si dhakhso leh AADAN AHAYN "jimicsi xad dhaaf ah".
U-foorarsada nolosha: Qaabka aadka u-aan caadiga ahayn ee Matt ee "ka soo baxa" qorshahan cunto ee kuu dammaanad qaadaya inaadan dib u soo ceshanayn dhammaan miisaankii kaa lumay… iyada oo aan lagaa rabin inaad ku noolaato qorshaha cuntada inta ka harsan maalmahaaga.
Sababta caadiga ah ee cunaysa borotiinka xad dhaafka ah - haa, xitaa borotiinka caatada ah - waxay ficil ahaan ugu adkeyneysaa shaqsiyaadka caadiga ah inay caato noqdaan.
Xaqiiqada: Inta badan macaamiisha Matt xaqiiqdii waxay ku kacaan QAADASHADA lacag caddaan ah iyada oo ay ugu wacan tahay soo-jeedinta ku xusan bogga 42. Xitaa haddii ay ahayd inaad maanta lacag badan ku bixiso hagitaankan, runti waad badbaadin lahayd lacag mustaqbalka fog.
Waa tan wax….kama iibsan kartid buugga luminta baruurta meel kasta laakiin halkan waa!
Waxa intaa dheer Buugga Khasaaraha Baruurta Dhulka hoostiisa, waxaad heli doontaa gelitaanka cinwaanka emaylka shakhsi ahaaneed ee Matt Marshall, oo ah fursad aad ku guuleysato abaalmarinta lacageed ee 10x “I Double-Dog Dare You”, iyo sidoo kale 3 kale oo ka mid ah buugaagta Matt Marshall oo BILAASH leh amarkaaga muddo xaddidan oo keliya!
Waxaad heli doontaa Barnaamijka Tababbarka 10-3-X, Da 'aan Da' lahayn, iyo The 60 Second Hormone Fix.
Adoo adeegsanaya farsamooyinka ku jira buugga Khasaaraha Baruurta Dhulka hoostiisa, waxaad ku tiirsanaan kartaa waqti yar. Sidoo kale waxaad heli doontaa 3 buugaag gunno ah oo aan ku soo sheegnay BILAASH!
Waxaa intaa sii dheer waxaad heleysaa 60 maalmood oo buuxa si aad wax walba u eegto oo aad go'aansato in hagaha uusan kugu habboonayn sabab kasta ha noqotee, waxaad dib u heli kartaa lacagtaada!
Shaacinta Affilaite: Qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha ku jira degelkeenna waa xiriiriyeyaal xiriir la leh. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad gujiso xiriirka oo aad iibsatid sheyga, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar leh oo aan kharash dheeraad ah kaaga bixin. Fikradaha oo dhami waa kuwo u gaar ah waxaanan kaliya kugula talineynaa badeecadaha iyo / ama adeegga aan aaminsanahay inay qiimo ugu fadhido akhristayaashayada.